डिसेम्बरमा राशि परिवर्तन गर्दै यी ४ ठुला ग्रह, शुक्र चल्नेछन् उल्टो चाल: यी ५ राशिलाई लाभै-लाभ ! – List Khabar
Home / रोचक / डिसेम्बरमा राशि परिवर्तन गर्दै यी ४ ठुला ग्रह, शुक्र चल्नेछन् उल्टो चाल: यी ५ राशिलाई लाभै-लाभ !
admin November 27, 2021 रोचक Leaveacomment 95 Views
अब सन २०२१ सकिनै लागेको छ । डिसेम्बर महिना सुरु भएसँगै नयाँ वर्ष २०२२ को आगमनको दिन गन्ती सुरु हुनेछ । ज्योति शास्त्रका अनुसार यस वर्षको अन्तिम महिना मानिसको जीवनमा उथलपुथल ल्याउनेछ। किनभने यो महिनामा ४ ठूला ग्रहले राशि परिवर्तन गर्न लागेका छन् । मेष, मिथुन, सिंह, धनु र कुम्भ राशिका लागि यो ग्रह परिवर्तन पाँच राशिका लागि शुभ मानिन्छ।
डिसेम्बर महिनामा सबैभन्दा पहिले मङ्गल ग्रह मंसिर ५ गते वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसको तीन दिन पछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा शुक्रले आफ्नो चाल परिवर्तन गरेर मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ। डिसेम्बर १० मा बुध धनु राशिमा प्रवेश गर्दैछ। यसपछि डिसेम्बर १६ मा सूर्य पनि धनु राशिमा पुग्ने भएकाले बुधसँग मिलेर बुद्धादित्य योग बन्नेछ ।
योसँगै डिसेम्बर १९ मा शुक्र मकर राशिमा प्रतिगामी हुनेछ अर्थात् आफ्नो बाङ्गो गतिमा हिँड्न थाल्नेछ । बुधले पनि डिसेम्बर २९ मा धनु राशि छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ र त्यसपछि डिसेम्बर ३० मा शुक्र ग्रह फर्केर धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ। यस समयमा ग्रहहरुले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्नाले यी ५ राशिलाई निकै शुभ हुने भएको छ ।
मेष राशिका लागि डिसेम्बर महिना शुभ रहनेछ। बृहस्पति ग्रह यस राशिका व्यक्तिहरुको लाभ घरमा रहेको हुनाले करियर तथा व्यापारमा सुखद नतिजा आउनेछ । मनोकामना पूरा हुन सक्छ। पुराना विवाद समाधान हुनेछन् ।
आध्यात्मिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुनेछ, यात्राको योग छ। तपाईलाई भाग्यको साथ पनि मिल्नेछ, जसका कारण तपाईको व्यक्तिगत जीवन र कार्यस्थलमा परिस्थिति तपाईको पक्षमा हुन थाल्नेछ। उधारिएको पैसा फिर्ता पाउन सकिनेछ ।
व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। जीवनसाथीसँग भएको विवादमा सुधार आउनेछ साथै पति पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । सामाजिक स्तरमा पनि मान-सम्मान मिल्न सक्छ।
यो महिना काममा व्यस्तता भइने तर तपाईले गरेको कामको शुभ फल मिल्नेछ। पारिवारिक जीवनमा पनि सुखद परिणाम प्राप्त हुनेछ। यो महिनामा पहिलेको महिना भन्दा अधिक लाभ हुने संकेत देखिन्छ ।
परिश्रम अनुसारको राम्रो नतिजा मिल्नेछ। कतै पैसा लगानी गर्नुभएको छ भने त्यसबाट नाफा हुने सम्भावना छ । नजिकका आफन्तबाट पनि आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ । कार्य क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ ।
Previous आफन्तकोमा बस्छिन् भनिएकी हजुरआमालाई घुम्दै जाँदा नातिनिले बृद्धाश्रममा भेटेपछि
Next अमेरिकामा बस्ने युबक भनेपछी नेपाली सेलिब्रिटी हुरुक्कै, गायिकापछी नायिकाले पनि अमेरिका बस्ने युबकसंग बिहे गर्दै